Millennials na nke agbụrụ ná mma — njem Lee - Official Site
Nke a bụ Njem okwu site na ERLC Summit on the Gospel na nke agbụrụ ná mma. N'okpuru ebe a bụ ihe odide site na ozi.
na mgbede a, M na a jụrụ ikwu okwu banyere Millennials na nke agbụrụ ná mma. Na m na-eche ihe ùgwù guzo n'ebe a na-eje ozi dị ka akụkụ nke a dị ịtụnanya mgbalị kwupụta ịdị n'otu na Chineke ụka.
Dị ka a rapper, M na a akụkụ nke a otutu concerts ihe karịrị afọ na nza nke Millennials na ndị nọ n'ọgbọ nile ranges. Na m na hụrụ na music n'ezie nwere a ụzọ n'otu ndị. E nwere ụfọdụ concerts ebe e nwere nanị otu omume igwe mmadụ nke ndị mmadụ: ma eleghị anya, ọ bụ ihe niile bọl Ndị Nne na-acha ọcha suburban afọ iri na ụma, ma ọ bụ niile bi n'obodo ukwu na ụmụ akwụkwọ kọleji, ma ọ bụ niile Southern Baptist ndi ozuzu aturu yi khakis (na naa, ma eleghị anya, ọ bụghị na ikpeazụ). Ma e nwekwara ọtụtụ ebe e nwere nile di iche iche mmadụ dị eto eto na ndị agadi, nwa ọcha, na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Na ndị na-edebe ya mgbe iju unu anya di iche iche, na m na-eche na ọ bụ a n'ezie ezi ihe nakwa.
Mgbe m na-eme na-eche nke ahụ dị mma na ebube, Echeghị m na ọ bụ dị ka nnukwu dị ka ụfọdụ mee ka ọ bụrụ. Ụbọchị ọ bụla e nwere concerts dị ka nke a niile ná mba ahụ. E nweghị ihe ọ na pụrụ iche banyere ihe na-dị iche iche iche iche nke ndị chikọta. Ọ na-eme mgbe niile na concerts, ma ọ bụ Sporting ihe, etc. Mgbe onye na-ese ma ọ bụ a òtù egwuregwu bụ etiti nke uche, ndị nọ n'ebe ahụ na-ada ọnụ ịhụnanya ha maka na music ma ọ bụ na otu egwuregwu. Ndị mmadụ na-adịghị n'ezie nwere na-jikọtara ọnụ. Ha adịghị ọbụna nwere n'ezie ka-esi na-. Ha dị nnọọ nwere anabataghị onye ọ bụla ọzọ n'ihi na a di na nwunye nke awa.
Nke ahụ abụghị ụdị ịdị n'otu na Chineke dị ná mma na anyị na-na na mgbe. Na ụdị ịdị n'otu bụ na-adịgide adịgide. Ọ na-adịghị emepụta ihe ọ bụla. Ndị a na-adịghị ejere ozi n'ezie ibe. Na ọ dịghị n'ezie arụtụ aka ebube nke Kraist na ozioma ya, n'otu ụzọ.
Ụdị ịdị n'otu na anyị na mgbe ọzọ bụ na-adịgide adịgide na ndị ọzọ substantial- ọzọ n'anya.
Ụdị ịdị n'otu na anyị na mgbe a pụghị mepụta mere nkịtị egwú ma ọ bụ omenala ọdịmma. Ụdị ịdị n'otu na anyị na mgbe naanị ike na-amịpụta Oziọma Jizọs.
Na na n'ezie bụ ya mere anyị na-ekwu okwu banyere Oziọma na agbụrụ ná mma, ọ bụghị naanị agbụrụ ná mma.
Tụlee okwu ndị a na site John 11:
... O buru amuma na Jizọs ga-anwụ maka mba ahụ, na ọ bụghị naanị maka mba ahụ, kamakwa iji na-ekpokọta onye na umu Chineke ndị gbasasịrị agbasasị ná mba ọzọ.
Nke ahụ bụ ụdị ịdị n'otu na anyị na mgbe:ndi ọtụtụ na iche iche nile ịghọ otu.
Anyị ọgwụgwụ ihe mgbaru ọsọ na-adịghị nnọọ na-ọcha na oji ndị ahụ n'otu ụlọ. Jay-Z nwere ike ime na. Mgbaru ọsọ anyị bụ ịkpọsa udo na ịdị n'otu na Jizọs emezuworị na-akpọ ndị mmadụ n'ime na. Anyị chọrọ ka ndị mmadụ na-enwe na ùjú e na-ekwusa ya n'ebe niile ha na-aga. Na na anyị chọrọ na mgbe ọ bụla ọgbọ. Ma ọ bụ naanị-abịa site na Gospel.
mgbanwe: Narị Afọ Iri ọgbọ bụ n'ezie ndị mụrụ ná mmalite 80s ruo 2000s. na anyị (Millennials) -ezi ihe na nke na mbụ, mfe ụdị ịdị n'otu. Ma, gịnị banyere na miri, ihe ọkpụrụkpụ, na ihe siri ụdị ịdị n'otu?
Ọ bụrụ na ị bụ onye na Narị Afọ Iri dị ka onwe m, mgbe ahụ, m chọrọ ka ị tụlee ụzọ anyị pụrụ ịnọgide na-alụ ọgụ maka idozi. Ma ọ bụrụ na ị bụghị a Narị Afọ Iri (aka na ị na-ochie), mgbe ahụ, eleghị ị pụrụ ịṅa ntị na otú e si akpọ Millennials ka a big Bible ọhụụ. Nke na-aga n'ihi na ndi ozuzu aturu, ndị ụka, nne na nna, enyi, etc.
E nwere ụfọdụ nsogbu na-eche echiche banyere agbụrụ ná mma na ọgbọ a. Ọ dị mfe na-akpọ ndị mmadụ ma ịdịghachi ná mma na ịgba ha ume na-akpọ ndị ọzọ na otu. Ebe a na-atọ pụrụ iche ihe mgbochi m na-eche na anyị nwere na-akpọ Millennials a:
1. Ụfọdụ Millennials na-eche agbụrụ erughị ala bụ anyị nne na nna ochie nsogbu.
N'ezie, ihe dị nnọọ iche ugbu a ná mba a karịa ha bụbu. Nna nna m gwara m akụkọ ndị na-m ike ikweta,nna m mkpesa n'oge ruuru ije, na nne m na-agwa m akụkọ nke na-echeta ịbụ agọ hotel ụlọ dị ka a child.Those na-adịghị nnọọ m ahụmahụ. Nkwado iwu segregation bụ agaghịkwa a eziokwu. Na stof agbanweela.
Ya mere,, ọtụtụ n'ime anyị na iche na anyị na ndị dị otú ahụ a kpamkpam dị iche iche oge, nke na-eme agbụrụ na ibe ya agaghịkwa a mkpa mkparịta ụka. One rapper kwuru, "E nweghị onye ịkpa ókè agbụrụ na Internet. Ịkpa ókè agbụrụ nanị na-o nwere ike ịbụ ka ọgbọ ise gara aga ... ịkpa ókè agbụrụ bụ n'ihi na-Agaghị m asị na ọgbọ. Yeah, dị ka ọgbọ ise gara aga. Racism akarịala. Ọ bụ ochie ndị na-anọgide na-ejide on ka ọ na ... "
Nke a bụ ihe ọtụtụ Millennials na-eche .... "Anyị na-now na a post-agbụrụ mmadụ. E nwere nza nke agbụrụ na nwunye di na anyị na ọgbọ. Na nke N'ezie anyị nwere a nwa president. Ọ bụ ihe niile n'oge gara aga. "
Ọ dị mwute, ụfọdụ na-adịbeghị anya ọmụmụ gosiri na Millennials na-enye ndị ọzọ ọnụ eme hara nhata karịa ọgbọ gara aga, ma anyị na ka ihu ọma dị nnọọ ka ịkpọasị ka ndị mụrụ anyị ji. ma, anyị na-eche na anyị na post-agbụrụ, nke bụ a dị ize ndụ Nchikota.
N'ezie, -adịbeghị anya ihe ọbụna dị ka akpa ókè agbụrụ Chants n'etiti Oklahoma fraternity na-egosi na ịkpa ókè agbụrụ dị ndụ ma na mma na anyị na ọgbọ. ma na mwute, gwụkwala ma ọ na gwuo, anyị agọnahụ ya adị.
Ịkpa ókè agbụrụ bụ mgbe aghụghọ ndị ọzọ, ma nke ahụ apụtaghị na ọ bụ obere mmehie. Ọ dị ya nnọọ pụtara na ọ bụ ihe ndị ọzọ sneaky karịa tupu. Na na pụrụ ime ka ọ tricky na-alụ ọgụ.
2. Ụfọdụ Millennials na-eche mmadụ mgbasa ozi ọrụ ahụ zuru.
Social media bụ ihe ịrịba onyinye. Anyị na-na ọbụna hụrụ mmadụ mgbasa ozi ihe ịma aka na ịchịkọta ndị mmadụ na ìhè nke na-adịbeghị anya agbụrụ mbipụta na U.S. Ma ndị ọgbọ m nwere ike mfe adaba n'ọnyà nke iche echiche na ọ bụ iji na-nanị ịkọrọ ezi ihe na-elekọta mmadụ media. Ụfọdụ ndị na-akpọ nke a slack-tivism:ka retweet oru, ndị nkwusa 'ruturu, na blog posts banyere ihe, na na-akwụsị n'ebe ahụ.
Nke ahụ bụ ezughị! Anyị nwere n'ezie mee ihe karịrị nke ahụ. Ekwu okwu banyere nke a online ma ọ bụ ọbụna n'etiti ndị enyi anyị bụ ihe dị mma, ma ọ bụ adịghị ezu. Na-enwe na-elekọta mmadụ media enyi ọzọ ethnicities na omenala dị mma, ma ọ bụ maa ezughị.
3. Ụfọdụ Millennials na-echeghị na Okwu Chineke bụ zuru ezu n'ụbọchị anyị.
N'ihi na Narị Afọ Iri Kraịst, anyị na-ebi a ụbọchị ebe Bible na-anaghị akwanyere ùgwù dị ka ọ na otu bụ. Na n'ihi na, anyị onwe anyị obi ike na Bible na-shrinking. na Dr. Eze ụbọchị, ndị mere mgbe eziokwu Akwụkwọ Nsọ, ma ọ bụghị na anyị. Ọ bụ a divider. Ha na-ekwu na ihe anyị mkpa n'ezie bụ a dị iche iche, ọzọ yana idobe okirikiri ozi. Na otú a na-a ozi kwesịrị ime ka a n'ezie dị iche bụla ay?
Anyị na-adịghị mkpa karịa Christian Gospel mkpọsa, ọtụtụ eche. ha, niile anyị chọrọ bụ Christian edinam -as ma ọ bụrụ na-ekwusa ozioma bụ ihe emereme. Anyị mkpa n'ezie na ihe karịrị ekwusa ozi ọma, ma anyị nwere ike hapụ ozi oma, ma ọ bụ anyị ga-naanị nwere ụdị ìhè nwa oge dịrị n'otu m ekwu banyere n'elu.
Ọfọn, ndị na-atọ mgbochi Echere m na anyị na-eche ihu na-akpọ Millennials agbụrụ ná mma. Ya mere,, mgbe ahụ ihe anyị ga-eme? Ọ bụrụ na anyị bụ ndị ndú chọọchị ma ọ bụ ndị otù nke ụka ma ọ bụ ọbụna nne na nna, olee otú anyị lebara a ná ndụ nke ndị ọgbọ m?
Ebe a na-atọ mfe ngwọta. Echere m na onye ọ bụla n'ime adres ndị a niile atọ nke n'elu nsogbu. Na isi ihe m na-achọ ka pịa ebe obibi bụ na ọ bụ nanị ndị Gospel na-arụpụta ụdị ịdị n'otu na anyị na mgbe.
ngwọta #1: Ikwusa ozioma nke ná mma
Ama m na o yiri doro anya, ma ọ dị oke mkpa na-ya chere na-ele anya n'elu.
M na dị nnọọ kpaliri Atlanta ka o nyere akụ a ọhụrụ ụka, ma tupu na m na mkpara na ụka na D.C. na onye na e ruo afọ anọ. N'oge m na e nwere, M hụrụ na chọọchị na-eto eto nke ukwuu na iche iche, na ọ bụ a mara mma ihe ịhụ. E nwere ndị ọzọ na ndị ọzọ ojii òtù, Chinese òtù, agadi nọ, na tọrọ òtù. Ọ bụ oké na-ekiri baptizim bụ ebe e nke a crazy di iche iche n'etiti ndi ahu Chineke na-azọpụta.
Ọ bụ ezughị okè di iche iche, ma, ọ bụ mara mma. Na m na-eche na ọ mere, ọ bụghị n'ihi na chọọchị nọrọ ihe ka ukwuu n'oge anyị a na-ekwu banyere agbụrụ ná mma, kama n'ihi na anyị nọrọ ihe ka ukwuu n'oge anyị a na-ekwu banyere ezigbo ozi nke Chineke dị ná mma.
Gịnị mere di iche iche eme?
Jizọs na-ekwu John 12:
ma m, mgbe m na-welie site n'ụwa, ga-abịarukwa madu nile onwe m
Jizọs kwuru mgbe ọ na-welie, nke pụtara mgbe O na-anwụ n'elu obe, ọ ga-adọrọ madu nile na ya. O sigh ụfọdụ iche iche nke ndị, ma madu nile. Ọ dịghị akpa ókè ebe a. Mgbe Jọn onyeozi na-eji okwu "niile,"Ọ pụtaghị ọ bụla otu onye, ma ihe niile mmadụ na ìgwè dị iche iche. Ihe karịrị nanị Israel, ma mba ndị ọzọ dị ka nke ọma. Chineke kere iche iche iche iche, na Jizọs nwụrụ isere iche iche iche iche ka ya onwe ya.
Nke a bụ ka obi mkparịta ụka anyị ebe a. The ihe na-ekewa anyị bụ mmehie. The mgbọrọgwụ nke ịkpa ókè agbụrụ na agbụrụ erughị ala na agbụrụ nkewa bụ mmehie. Na Christ ama mesoo mmehie a ọnwụ igbu mmadụ nile. Anyị nwere na-ekwusa ozi.
Ma ọ bụghị ya, anyị ga-ala n'iyi oge anyị na-agbalị ike a dị iche iche ụdị ịdị n'otu kama ikwere ịdị n'otu Jesus ama kere. Mkpughe 5 ekwu Jesus, "... Zụrụ nke Chineke ndị mmadụ si n'ebo niile, asụsụ, ndị mmadụ, na mba. "Nke a atụmatụ Chineke nile, tinyere, na anyị ga-esi na-agwa ya!
M na-eche ma ọ bụrụ na ị na a na ịdabere na ozi n'ozi gị. Ọ bụ anyị bụ isi ngwá agha.
Gospel Ịdị n'Otu
Gospel ịdị n'otu anyị karịrị nnọọ ọtụtụ n'ime anyị na-aghọta. na Ndị Efesọs 4, Paul okwu banyere nke a miri emi ịdị n'otu. Rịba ama nile ugboro ọ na-eji okwu ahụ "otu."
E nwere otu ahụ na otu Mmụọ dị nnọọ ka ị na-akpọ ka otu olileanya ahụ bụ nke gị oku-otu Onyenwe anyị, otu okwukwe, otu baptism, otu Chineke na Nna nke ihe nile, onye bụ isi ihe niile na ebe niile nakwa n'ebe niile. Ndị Efesọs 4:4-6
Nke ahụ bụ karịrị nnọọ nke ọzọ ịdị n'otu na anyị na-eji na-. Na ozi ọma bụ mkpa ịghọta ihe anyị na na miri ụzọ.
Anyị Millennials mkpa otu Gospel onye ọ bụla ọzọ. Na ọ na-arụpụta ezi ịdị n'otu. Ya mere,, ka na-anọgide na-atụkwasị obi na ọ na-ekwusa ya, ọbụna ma ọ bụrụ na anyị omenala adịghị achọ ịnụ ya. Na wider omenala, anyị chọrọ ịhụ iwu, na anyị chọrọ ịhụ ikpe ziri ezi. Ma, ka anyị ghara ichefu ihe Onyeikpe nke mmadụ niile esesịn nyefere ndị.
Naanị Oziọma nwere ike ịmepụta a ụdị ịdị n'otu. Ọ dị mma, n'ihi ya, ihe ndị ọzọ na ngwọta e nwere wezụga nanị mkpọsa?
ngwọta #2: Ọgụ ka Gospel ịhụnanya na nghọta
Anyị nile nọ nnọọ maara ihe e kwuru nke Jesus ke John 13.
Lee anya na John 13:34-35. "A ọhụrụ iwu m na-enye gị: Ịhụ ibe ha n'anya. Dị ka m hụrụ unu n'anya, otú ị ga-hụ ibe ha n'anya. Site na nke a niile na ndị mmadụ ga-amarakwa na unu bụ ndị na, ma ọ bụrụ na ibe unu n'anya. "
Ma Nso ke emi ọwọrọ, ndien nso ke emi n'ezie anya dị ka? Nke a ịhụnanya o kwuru okwu banyere ebe a bụ a dị nsọ n'anya nke ukwuu a na inwe nkwa na-ha mma. Anyị kwesịrị inwe na nsọ ọmịiko n'ebe ibe unu. Ayi getinye onwe ayi ka ọ bụla ọzọ si ezi. Anyị kwesịrị ịchọ ka ibe mara Christ ọzọ, eto ọzọ, na aka ime nke ọma. Ọ bụla na mmekọrịta anyị nwere ibe kwesịrị ịna-eme ịhụnanya.
Ma, Jizọs adịghị ka asị ịhụnanya ibe; ọ ezipụta otú anyị na-ahụ ibe ha n'anya. The otú: Ka Ọ hụrụ anyị n'anya. Chaị! Ọ dara ogbenye n'ihi anyị, tachiri ụwa mmehie anyị, na tọrọ ndụ ya ala n'ihi na anyị. Na Ọ na-ekwu na anyị kwesịrị ịhụ onye ọ bụla ọzọ n'ụzọ yiri nke ahụ. Ma nke ahụ bụ otú ndị mmadụ ga-ama na anyị na-eso ụzọ.
Nke a hụ ibe anyị n'anya fleshes onwe ya na ọtụtụ ụzọ. Ndị ọzọ nke New Testament na-ewepụta a nta ma nke anụ ahụ na ihe a ịhụnanya anya dị ka.
Ndị Galeshia 6:2 – Bear ibe n'ịbụ arọ
Ndị Efesọs 4:32 – Na-enwenụ ọmịiko n'ebe ibe unu
Ndị Filipaị 2:13 – tụlee ndị ọzọ mma karịa onwe gị
Ndị Hibru 3:13 – agba ibe ha ume kwa ụbọchị
James 5:16 – -ekpe ekpere maka ibe
1 Peter 3:8 – N'anya dị ka ụmụnne
Nke ahụ bụ oké njọ n'anya.
Elegharala nke onye m bụ
Lee bụ ihe, ma ọ bụrụ na anyị na-aga ịhụ ibe ha n'anya, anyị nwere ịmata onye ọ bụla ọzọ. Anyị nwere ihe banyere onye ọzọ. Olee otú m na-agba nke nwanne m nwoke ibu arọ, ma ọ bụrụ na m na-amaghị ihe ya ibu arọ na-? Olee otú m pụrụ igosipụta ọmịiko n'ebe ị, ma ọ bụrụ na m na-amaghị nrụgide ndị itu on ị? Ịghọta onye ọ bụla ọzọ na-enyere anyị hụrụ ibe ha n'anya nke ọma. (megharịa)
"M na-adịghị ọbụna ịhụ gị dị ka nwa."
A di na nwunye nke afọ gara aga, M na-na-akparịta ụka mmadụ na ezigbo enyi m bụ ndị na-eme ka a white.We n'ebe ahụ mushy ịhụnanya ụmụnna ụdị oge. O wee sị m, "Iji m, ị dị nnọọ enyi m Njem. M adịghị ọbụna ịhụ gị dị ka nwa. "Ugbu a, m ekele maka ihe ọ nọ na-agbalị na-ekwurịta okwu m. Ọ na-aga na-ahụ m n'anya ọ bụla na-erughị ya ọ bụla ọzọ enyi. Ma n'akuku nke-ọzọ, Echere m na ọ na-unhelpful ụzọ ele ndị ọzọ. Ọ ga-abụ dị ka m na-agwa m otu n'ime otu enyi, "Unu maara m nnọọ ịhụ gị dị ka Johnny. M adịghị ọbụna na-achọpụta na ị na-alụbeghị di. "Ọfọn, ọ bụ otu. Na ọtụtụ ndị na-siiri, ọchịchọ, na ihe ịma aka na-aga nwere ihe na-eme na eziokwu ahụ bụ na ọ bụ otu.
Na otú ahụ ka m ume m enyi ghara iche naanị banyere m blackness oge ọ bụla o kwuru okwu m- ma ọ bụghị ime ka hà dị ka ọ dịghị ebe ahụ. N'ihi na ọ bụ, ọ na-emetụtakwa ndụ m.
1. N'ihi na adị m nwa. -Amasị m ịbụ nwa. Na Chineke mere ka m otú a.
2. E nwere ihe pụrụ iche mere ka o ndisịne nwa, ma ọ bụ ịbụ a na-amụrụ, ma ọ bụ a mama, ma ọ bụ ịbụ otu.
My nwa ahụmahụ
Ụfọdụ n'ime anyị na-adịghị na-eche banyere anyị agbụrụ ukwuu na anyị kwa ụbọchị ndụ. Na nke ahụ bụ ezi. Ma e nwere ndị ọzọ n'ime anyị na-eme. Na m nwere ike na-ekwu okwu n'ihi na onwe m na m nwa ahụmahụ. M ike na-ekwu okwu maka mmadụ nile.
E nwere onye na extra ibu arọ na m, na ọtụtụ ndị isi ojii, na-ebu. Anyị na-ebu ibu nke maara ndị mmegbu akụkọ ihe mere eme na mba anyị: na ndị isi ojii nọ na-emeghị ihe zuru ndị, na ụfọdụ n'ime ndị na ọnụ ọgụgụ na anyị akwụkwọ ego ekesịpde nwa ndị mmadụ dị ka ihe onwunwe, ebe ọ maara na ịkpa ókè agbụrụ ka dị, na ịbụ onye nnata nke na ịkpa ókè agbụrụ mgbe ụfọdụ.
Na ịmara nke a na-agbanwe ụzọ ị hụrụ mmadụ n'anya.
E nwere ọtụtụ ugboro mgbe ihe e chere banyere m(na-abụghị eziokwu) dị nnọọ dabeere na m dị n'ile anya. ọtụtụ mgbe, ọ e chere na m bụ onye omekome whenI enweghị ike inwekwu si na. Ọtụtụ mgbe ọ e chere na m na-akpata ịda ogbi na-agụghị akwụkwọ. Ọtụtụ mgbe ọ e chere na m na-adịchaghị mma ka m na-acha ọcha ndị ọgbọ ma ọ bụ na m gaghị dị ka ezi. Na ndị na-eche na ha mere ka o doo m. Ọ bụghị banyere ndị nakweere n'ebe m hụrụ n'anya ọjọọ ụzọ. Dị ka anụ ndị na-ekwu, "Nwanne gị nwaanyị bụ ọ dị ka mma, n'ihi na a nwa agbọghọ m na-ekwu. "Dị ka ọ bụrụ na nwa bụ obere mara mma. E nwere ihe nakawa etu esi nke a ná ndụ m na ná ndụ nke ọtụtụ. M ga-enwe a okwu na nwa m, dị nnọọ ka papa m mere m, ịdọ aka ná ntị ya ịkpachara anya nakwa na e nwere ndị ga na-amasị ya nanị n'ihi na ọ bụ nwa. Na ọ bụ ihe mmezi ibu arọ na m ga-ebu.
Gịnị mere ahụmahụ okwu?
Ma, gịnị mere nke gbasara? Gịnị mere m na-agwa gị ihe niile a? N'ihi na iwu ịhụ ibe unu n'anya. Dị nnọọ ka ị hụrụ n'anya mama gị na a pụrụ iche n'ụzọ, na ndị okenye unu, ma ọ bụ obere-ndabara ọma ndị, ị kwesịrị ị na n'anya dị iche iche ethnicities na pụrụ iche ụzọ. Anyị nwere pụrụ iche ọṅụ, ibu, na ahụmahụ, na ị nwere ike ghara hụrụ ndị ọzọ n'anya nakwa ma ọ bụrụ na ị na-eleghara ma ọ bụ na-eleghara ha pụrụ iche na ahụmahụ.
Echetara m na-agwa a Chinese nwanna nwanyị bụ onye isonyere anyị na chọọchị. Ọ bụ naanị kemgbe na-ekwu maka a obere oge, na dị ka ọ na-ekwu banyere ya na ahụmahụ na okwuchukwu, ọ kọwara otú o si esiri ama maka ya na-eso. Ọ dịghị mgbe m gaara eche banyere ya na miri ma. Ọ kpamkpam gbanwere ụzọ m anya na ahụmahụ nke ụmụnna nwaanyị ka ya na anyị na chọọchị, na o nyeere m aka iche ihe nke ọma banyere ihe ha hụ ha n'anya.
Naanị Oziọma nwere ike a ụdị àjà ịhụnanya. Ya mere,, dị mkpa ka anyị laghachi Jesus na-arụ ọrụ ya n'ime anyị. Ọ ga-abụ ike, nke na-eweta m ka m ikpeazụ m mgbe.
ngwọta #3: Echela Ọ bụ Easy
Di iche iche na-egosi ịma mma na ezi-okwu nke ozi oma. Mgbe mmadụ na-abịakwute anyị na chọọchị, na ha na-ahụ di iche iche-a ụdị di iche iche ha na-adịghị-ahụ n'ụwa-ọ na-enye ha a ghọta nke ebube nke Gospel. Akwụkwọ Nsọ kwuru na onye ọ bụla nke na-akpọku aha Jehova ga-azọpụta-ọ bụghị nanị otu ìgwè ndị mmadụ-ma ọ mara mma mgbe nke ahụ bụ ike na-egosipụta na a local ahu.
Di iche iche na-eme ka ihe sikwuoro
Di iche iche bụ a mara mma ihe; ma ọ bụghị mfe. Ọ bụla na chọọchị-ọbụna ma ọ bụrụ na ndị mmadụ bụ nke otu agbụrụ, afọ, background- nwere nsogbu n'ihi na anyị na mmehie. Ma di iche iche nwere ike ime ka ya pụrụ iche mbipụta. Anyị niile na-eme ka anyị onwe anyị iche, ahụmahụ, presuppositions, biases, na ibu tinyere anyị. Na mgbe ụfọdụ na-emepụta esemokwu.
Akwụkwọ Nsọ bụ amaghị nke a ogu. Ọbụna na chochi mbu, ndị bibu gafee agbụrụ edoghi (dị ka e dekọrọ n'Ọrụ). Ya mere,, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ siri ike, ebe a bụ ole na ole random Atụmatụ maka otú ahụ n'ọrụ site ndị isi ike:
Bara uru Atụmatụ maka agbụrụ ná mma
1. Unu eledala ndị dị iche iche kwa iche iche.
Ha iche na-adịghị isi. Achọ ịghọta, ma ka na-enwe mmekọrịta na ha na-ejikarị. M nwere ike na-eche nke a oge mgbe m bụ azụ ke Philly, mgbe a prọfesọ ga na-akọrọ m ihe dị iche iche. Ọ ga-ekele ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na a, "Ụtụtụ ọma,"ma ọ bụ, "Good hụ gị." Ọ na-ahụkwa mụ na ihe niile nke a na mberede sịnụ, "Gịnị bụ elu nkịta?"Ma ọ bụ" Gịnị na-aga m nwoke?"
O nwere ike na na na maara nke m iche n'enweghị obi dị ka o nwere ịgwa m ihe n'ụzọ dị iche.
2. Echela stereotypes.
agbụrụ, afọ iche iche, etc. na-mejupụtara ndị mmadụ n'otu n'otu. Ndị mmadụ na ahụmahụ dị iche iche. Ụfọdụ stereotypes na-akpa ọchị na-adịghị njọ, ma ndị ọzọ na-akpasu iwe. -Esi mara onye nke ọ bụla dị ka otu onye.
3. Gbalịa ka ị ghara naanị enubata ndị na-ele anya dị ka gị.
Kpachapụrụ ewu mmekọrịta na ndị na-adịghị ele anya dị ka gị. Agha ọnwụnwa naanị iwepụta oge soro ndị folks ị ga-kasị ndammana jikọọ na. Mgbe ụka, purposely ikwu na ndị mmadụ bụ ndị dị iche iche. Ọ bụghị dị ka ọrụ, ma n'ihi na ha bụ onyinye aka ahu ka ndị na ndị na-ọzọ dị ka gị.
4. Kpachapụrụ achọ ịghọta ndị.
Na-emi emi relationally. ịjụ ajụjụ. Gee ntị nke ọma na ịghọta ndị mmadụ pụrụ iche ahụmahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ nke ihe mmadụ kwuru, tupu iwepụ ya n'uche ya, ege ha nti ma na-achọ ịghọta
5. -Anọgidesi ike site isi ike na-eto eto mgbu.
Di iche iche bụ ike, karịsịa mgbe anyị na-ekwurịta banyere agbụrụ / agbụrụ. Ụfọdụ mkparịta ụka nwere ike inwe n'ụdị na-egosi. Nwee amara na ibe ha. Always iche nke kacha mma na nke kasị njọ. Ọ bụrụ na mmadụ na-achọ ịghọta ị mejọrọ gị, amara na ha ndidi. Ha na-agbalị. Adịghị etinye mgbidi elu ma mee ka ọ gaghị ekwe omume n'ihi na ndị mmadụ na-eru nso na-aghọta. Ọ bụ a abụọ-ụzọ ámá.
Mgbe na-achọ ịghọta na mmadụ, unu atụla egwu ịjụ ajụjụ ma ọ bụ kwuo ihe na-ezighị ezi. Ị ga-ahọrọ okwu gị nke ọma, ma ị ga-ewere dị ize ndụ ma na-atụ anya na ụmụnna gị na-eme amara,.
Adịghị enye mgbe ọ bụ ike. Nke na-eduga a mere emede di iche iche kama n'otu di iche iche.
6. Jụọ onwe gị, ọ bụrụ na i nwere echiche banyere agbụrụ ọzọ / afọ / socioeconomic iche iche.
Nke ahụ bụ ajụjụ anyị kwesịrị niile a ga-ajụ onwe anyị. Ọrụ na-eche Bible / pụtara. Anyị niile kwesịrị ajuju otú anyị chere banyere ndị dị iche iche karịa anyị, gụnyere dị iche iche ọdịbendị na ethnically. Gịnị na-agbata gị n'uche mgbe ị rue onye n'okporo ámá? Gịnị na-agbata n'uche mgbe ị na-ahụ ha n'ime ụlọ ahịa? Anyị kwesịrị ajụ onwe anyị na-agbalịsi ike ịhụ ndị mmadụ ka Chineke si ahụ ha.
7. Na-na-akparịta ụka na-aga.
Nke a kwesịrị otu n'ime ọtụtụ mkparịta ụka. Nke a abụghị ọlị a keukwu ụka. Nke a na ọwọrọ amalite ọzọ mkparịta ụka. N'otu di iche iche anaghị eme eme na mberede. Ma ọ bụrụ na ọ dịghị mgbe anyị ikwu banyere ya, anyị agaghị na-maara na-arụ ọrụ n'ebe ọ na-. Share nchegbu na ndị siiri, ma ọrụ iji jide n'aka na i nwere ndị a na mkparịta ụka na ọmịiko, uche, amara, na ịhụnanya.
Ọ bụrụ na anyị anaghị ekwu banyere ya, anyị na-agba n'ime ihe ize ndụ nke n'ịnọgide na-ewere ya na nsogbu a esesịn a si mesoo n'oge gara aga. Na mgbe nsogbu ndị e, ma anyị na-amaghị, ọ bụ dị ka ọkụ nsogbu n'ụlọ gị. I nwere ike iteta otu ụbọchị ọkụ! Anyị kwesịrị ịma iji na-alụ ọgụ nke ọma.
8. -Atụgharị uche na Akwụkwọ Nsọ na-ekpe ekpere Chineke ga-enye gị a ahuhu maka ịdị n'otu.
Ịdị n'Otu bụ a nnukwu ihe, N'ihi ya, anyị kwesịrị ikpe ekpere ka Chineke ga-eto anyị ahuhu maka ya. Anyị na-iwu ka nwere otu uche. Anyị na-nyere iwu na-aghọta eziokwu ahụ bụ na anyị na-na otu onye n'ime Kraịst. Nke a abụghị a echiche anyị kere. Lee anya na Ndị Efesọs 4. Lee anya na Chineke zuru ụwa ọnụ nkwa nke Abraham na Jenesis. -Ele otú ọ nile agwụ na Mkpughe. Na-ekpe ekpere Chineke ga-enye gị a ahuhu maka nke a ụdị ịdị n'otu.
ma, dị ka anyị na kwuru ọtụtụ ugboro na-ama, naanị Oziọma nwere ike a ụdị àjà ịhụnanya na ịdị n'otu.
Egosi The World
Anyị chọrọ ọrụ itinye a Gospel na ngosi maka ụwa ịhụ.
N'oge na oge na yiri ihe kewara karịa mgbe ọ bụla, Jehova nwere ike iji nke a. Okwu Chineke bụ zuru ezu. Na ndị Chineke dị ka ihe atụ Chineke na-eji ime ka Okwu ya dị larịị. One Ọ na-eji ime ka Gospel enwu chawapụrụ.
Ọ bụghị naanị ojii na ndị ọcha na otu ụlọ, ma ojii na ndị ọcha na otu ezinụlọ.
na miri, truer ịdị n'otu.
Michael • April 9, 2015 na 11:47 Abụ • zaghachi
Ụfọdụ magburu onwe echiche ebe a. Adị m ọcha, ma gara ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-egwuri football na fọrọ nke nta niile na nwa okorobịa. Ya mere,, M bụ maa na nta na m akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị (na nnọọ na mkpuchi-ụlọ). Na-eto eto na Arkansas-Missisippi Delta, agbụrụ esemokwu ndị (ma ka na-na-) nri n'elu. Ị mgbe niile na-anụ na-adịghị mma na-ekwu si n'akụkụ abụọ banyere ndị ọzọ. Ọ bụ mwute. Gịnị bụ ikike a na-kewapụ gị onwe gị n'ọsọ-agbalị iru eru ndị na-abụghị mba. Ahụwo m na mbụ aka otú ịkpa ókè agbụrụ nwere ike n'azụ ọ jọrọ njọ isi n'ime chọọchị. Ọ bụ jogburu onwe. Ana m ekele maka ụmụ okorobịa dị ka gị, njem, bụ ndị dị njikere na-agbalị na ebịne ndị a okwu si a gospel dabeere n'ọnọdụ. Anyị na-akpọ n'anya nwanna anyị, n'agbanyeghị ihe acha nwanna anyị na-eme na-. M na-atụsi anya na multi-agbụrụ ụka adị gafee Delta. ma, nanị ụzọ anyị ga-esi n'ebe dị site na-achọ ibi ndụ na-gospel na kwa ụbọchị na ịbụ n'ezie kpachaara anya banyere ya.
Robin • April 9, 2015 na 3:12 pm • zaghachi
ịhụnanya a, njem! M na-adịbeghị anya malitere eduga a agbụrụ ná mma gburugburu na ọ bụrụ na gị na-agụ ga-achọ ụfọdụ free usoro ọmụmụ, ha nwere ike ịga nke a saịtị ibudata http://www.latashamorrison.com/2015/02/grace-based-bridge-building-pt-1/
N'anya ihe i kwuru banyere ha adịghị eleghara anyị iche na ihe ndabere Akwụkwọ Nsọ maka ịdị n'otu!
“Ọ bụghị naanị ojii na ndị ọcha na otu ụlọ, ma ojii na ndị ọcha na otu ezinụlọ.” Amen!
KwasiAgbottah • April 9, 2015 na 3:23 pm • zaghachi
Dị mma nke ukwuu. Ya mere mkpa. Ya mere na-enye aka. M ga-etinye ihe ndị a. ekele.
Rolfstlund • April 10, 2015 na 6:47 Abụ • zaghachi
M na kwuru ya n'ihu – Njem Lee bụ a n'ezie ezi na-ekwusa na-eme ya na a eziokwu, mfe na ezi ụzọ …. gọziri agọzi !!!
Damien • April 30, 2015 na 4:28 pm • zaghachi
kasị pụta ìhè, doro anya na nkenke.
Otis • June 27, 2015 na 8:39 Abụ • zaghachi
Taa bụ m mbụ na nke a webpage. M na a na-esonụ Njem lee music banyere 3years gara aga site Lecrae. M na-ekele Chineke maka ndụ ya na m n'ezie ụtọ nke a na-akụzi. M na-ebi Ghana ebe 99% nke anyị na-ojii ma nsogbu anyị ebe a ọzọ bụ nke agbụrụ.(dịghị agha agbụrụ na Ghana ezie maka njem nleta.) M pụtara na ụfọdụ na-ele anya dị ka ndị ” ziri ezi ndị mmadụ”. M mụtara alot si ozizi a nke m ga-etinye m kwa ụbọchị ndụ. Daalụ ịkwada na Chineke na-agọzi gị.
aha • December 14, 2016 na 3:39 Abụ • zaghachi
Hello, achọ enyi !
Lacey • Ka 14, 2017 na 10:13 Abụ • zaghachi
M na a na looknig maka a post dị ka nke a ruo mgbe ebighị ebi (na a ụbọchị)
Mwiza • January 1, 2017 na 2:51 pm • zaghachi
Great Teaching Njem. M n'anya ya. (Zambia)
Olivia • June 18, 2018 na 12:32 Abụ • zaghachi
M n'anya mkparịta ụka a na-ezi. Aghaghị m nnọọ a yiri na mkparịta ụka m ụmụ atọ. M ga-eji nke a n'isiokwu na-sikwuo otú anyị kwesịrị n'anya dị ka Jizọs. Obi dị m ụtọ maka Njem bi na gospel na ịkụziri ndị ọzọ ime otu ihe ahụ. Chineke na-agọzi gị niile.